भिक्षु जसले आफ्नो फेरारी बेचे | वर्तमान साहित्य
भिक्षु जसले आफ्नो फेरारी बेचे
जुआन अर्टिज | | लेखकहरू, किताबहरु, कथाहरू
भिक्षु जसले आफ्नो फेरारी बेचे प्रेरणादायक वक्ता र लेखक रोबिन शर्मा द्वारा लेखिएको एक अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याती गरिएको स्वयं सहायता पुस्तक हो। १ 1999 50। मा हार्पर कोलिन्स प्रकाशक समूह द्वारा प्रकाशित, यो ,० भन्दा बढी देशहरुमा ke० भन्दा बढी भाषाहरुमा अनुवाद गरीरहेको छ। २०१ 70 सम्ममा three० लाख भन्दा बढी प्रतिहरू बिक्रि भइसकेका थिए भिक्षु जसले आफ्नो फेरारी बेचे (अङ्ग्रेजीमा)।
पाठ लेखकको व्यक्तिगत अनुभवमा आधारित छ क्यानाडाली नागरिक शर्माजब म २ 25 बर्षको थिएँ, आफ्नो त्याग्ने निर्णय गरे प्रतिष्ठित दौड ट्रायल वकिल गोता लगाउन en खोजी गर्दै आफैं नतिजा स्वयं खोजको एक बाटो हो कि एक व्यापार कवच मा बदलियो कि ऊ दुनिया संग बाँड्न चाहान्छ र एक श्रृंखला को जन्म दिन्छ।
1 विश्लेषण र आफ्नो फेरारी बेच्ने भिक्षु को सारांश
1.1 वकिलको तरिका
1.1.1 जीवनमा सबैको साथ एक व्यक्ति?
1.1.3 भिक्षुको फिर्ती
1.1.5 सिवाना विधि
1.2.1 जीवनको गुणवत्ता विचारको गुणवत्तामा निर्भर गर्दछ
1.2.2 जीवनको उद्देश्य (धर्म)
1.2.3 अनुशासन को शक्ति
1.2.4 निःस्वार्थ अरूको सेवा गर्नुहोस् र आफैमा लीन हुनुहोस्
2 प्रविधि र अभ्यास पुस्तकमा वर्णन गरिएको छ
3.1 जन्म, बचपन र अध्ययन
3.2 रोबिन शर्मा, लेखक
3.2.1 रोबिन शर्मा द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकहरु
विश्लेषण र सारांश भिक्षु जसले आफ्नो फेरारी बेचे
जीवनमा सबैको साथ एक व्यक्ति?
जुलियन Mantle, एक प्रसिद्ध हार्वर्ड कानून स्कूल स्नातक परीक्षण वकील, जीवन मा यो सबै लाग्यो। तपाई अरु के माग्नुहुन्छ? उसको तलब एक मिलियन डलर भन्दा बढी हो, ऊ भव्य हवेलीमा बस्दथ्यो र रमाइलो फेरी शानदार थियो। यद्यपि, प्रदर्शनहरू भ्रामक थिए: मेन्टल उनको धेरै कामको बोझको कारण धेरै तनावमा थिए।
उसको बिग्रँदो स्वास्थ्यको बाबजुद, नायकले बढ्दो जटिल र माग भएका केसहरू स्वीकार गरे। सम्म एक दिन ऊ पूर्ण अदालतमा ह्रदयको पक्राउ भयो। त्यो पतन पछि, Mantle कानून को अभ्यास गर्न रोक्नुभयो।, ऊ हरायो सार्वजनिक जीवन र उनले काम गरेका फर्ममा उनका सहकर्मीहरू, उनलाई फेरि भेट्न सकेनन्। अफवाहहरु कि उनी एशिया गएका थिए।
भिक्षु जसले आफ्नो बेच्यो ...
सत्य यो थियो वकिलले आफ्नो विलासी सम्पत्ति र आफ्नो गाडी बेचे, याे सबै क्रममा फेला पार्न तपाईंको जीवनको लागि अधिक ट्रान्सन्डेन्टल अर्थ। तीन बर्ष पछि, Mantle फर्ममा फर्क्यो जहाँ उसले काम गर्यो; ऊ रूपान्तरण भएको थियो, उज्ज्वल थियो, एकदम स्वस्थ देखिएको थियो, खुशी संग गम्भीर। त्यहाँ उनले आफ्ना पूर्व सहकर्मीहरूसँग सम्बोधन गरे कि उनले भारतको भ्रमण गरे र उमेर नभएका योगीहरूको बारेमा सिके।
काश्मिरमा, मेन्टलले सिवानाको metषिसँग भेट गरे, जसले यसलाई प्रोत्साहित गर्‍योaहिमालय सम्म आफ्नो बाटो जारी राख्नुहोस्। संसारकै सब भन्दा अग्लो पहाडहरू मध्ये, नायकले सिभानाका ज्ञानी मानिसहरू - केही भिक्षुहरूसँगै बस्ने र बस्ने निर्णय गरे। र आफूलाई भेटियो।
योगी रामनले आफ्ना सबै ज्ञानहरू पूर्व वकिलसँग साझा गरे। त्यो बाटो, जीवनशक्तिले भरिएको जीवन बिताउनको लागि मेन्टलले आफ्नो उर्जा बचाउन सिक्यो, रचनात्मक र रचनात्मक विचारहरूले भरिएको। मालिकले आफ्नो सिकारुमा राखेको एक मात्र शर्त भनेको यो थियो कि उसले आफ्नो पुरानो कार्यस्थलमा फर्किनु पर्छ र सिवाना विधिका आदेशहरू साझा गर्नुपर्दछ।
बगैचाको बीचमा धेरै सुन्दर र शान्त प्राकृतिक, त्यहाँ एक विशाल रातो लाइटहाउस थियो जुनबाट अत्यन्तै अग्लो र भारी रस लडाकु आएको थियो। सेनानीले केवल सानो गुलाबी तारा लगाएको थियो जसले उसको निजी भागहरू ढाकेको थियो। जब उनी बगैंचा वरिपरि घुम्न थाले, उनले सुनको क्रोनोग्राफ पायो जुन कसैले त्यहाँ छोडिदियो।
चाँडै पछि, लडाकू ऊ चिप्लियो र बेहोस भयो। उठेपछि, आफ्नो बायाँ तिर हेरे र पत्ता लगाए हीरामा ढाकिएको सडकखुशीको लागि मार्ग र पूर्ण अस्तित्व ...)। पहिलो नजरमा यो दन्त्यकथा काल्पनिक कथा जस्तो देखिन्छ, अर्थहीन। यद्यपि कहानीको प्रत्येक तत्वको एक शक्तिशाली अर्थ छ तल वर्णन गरिएको कुञ्जी संग।
जीवनको गुणवत्ता विचारको गुणवत्तामा निर्भर गर्दछ
रस सेनानीको कल्पित कथाले यो झल्काउँछ पूरा जीवन बिताउन दिमागको निपुणता आवश्यक छ। यद्यपि गल्ती र गिरावट (प्रतिकूलता) अस्तित्वको अंश हुन्, मानिसहरू नकारात्मकताबाट डराउनु हुँदैन। यसको सट्टामा, लेखक विचारहरूको निपुणता मार्फत आशावाद प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्दछन्।
रस सेनानीको कल्पित कथामा रातो लाइटहाउस देखा पर्छ, जसबाट यो चरित्र बाहिर आउँदछ। यो निर्माणले फोकस प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्नुपर्दछ उनीहरूको धर्म। मेरो मतलब कसैको उपहार र प्रतिभा को मान्यता को माध्यम मात्र प्राप्त कि वीर व्यक्तिगत मिशनसामना गर्नुपर्‍यो र उनीहरूलाई जित्न डराउने स्वीकृति सहित।
अनुशासन को शक्ति
समय ईमान्दारीपूर्वक प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ। दन्त्यकथामा रस सेनानीको छोटो कपडाले आत्म-अनुशासनको प्रतीक हो। यस सम्बन्धमा, सिवाना विधिले निर्दिष्ट गर्दछ कि लामो समयको लागि मौन रहनको भाकल जनताको इच्छालाई सुदृढ पार्नको लागि उपयुक्त हुन्छ।
त्यस्तै गरी, सुनको घडी बुद्धिमान् व्यक्तिहरूले आफ्नो समय व्यवस्थापनको लागि गरेको सम्मानको प्रतीक हो। किनभने आफ्नो समय प्रबन्ध गर्न सक्षम व्यक्ति आफ्नो जीवन प्रबन्ध गर्न र यसको प्रत्येक क्षणको मजा लिन सक्षम व्यक्ति हो। यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै, अनावश्यक गतिविधिहरूमा समय बर्बाद हुनबाट जोगिनको लागि र आफ्नो दिनको योजना राम्ररी गर्न "होईन" भन्न सिक्नु आवश्यक छ।
निःस्वार्थ अरूको सेवा गर्नुहोस् र आफैमा लीन हुनुहोस्
"यहाँ र अहिले" सबैको सब भन्दा प्रासंगिक क्षण हो; केवल यस प्रकारले जीवनको साँचो धन (हीरा) सराहना गर्न सकिन्छ। थप रूपमा, प्रत्येक क्षणलाई अझ इनामदायी बनाउन, व्यक्तिहरूले आफूलाई अरूको सेवामा समर्पण गर्नुपर्छ बदलामा केहि आशा बिना। यस अर्थमा, भिक्षुहरूले मान्टललाई भने कि "अरूलाई मद्दत गरेर तपाईं आफैंलाई मद्दत गर्नुहुन्छ।"
प्रविधि र अभ्यास पुस्तकमा वर्णन गरिएको छ
गुलाबको मुटु, दिमागलाई जित्ने एकाग्रतामा व्यायाम;
स्पष्ट र ठोस लक्ष्यहरू राख्ने पाँच चरणहरू:
एक मानसिक तस्वीर लिनुहोस्
"जादू २१ दिन नियम" नयाँ बानी सिर्जना गर्नका लागि
सम्पूर्ण प्रक्रियाको आनन्द लिनुहोस्;
एक चम्किलो जीवन को लागी 10 विधीहरु:
प्रचुर ज्ञानको अनुष्ठान
व्यक्तिगत प्रतिबिम्ब को अनुष्ठान
प्रेरणादायक मन्त्र (बोलिएको शब्द अनुष्ठान)
आत्म-अनुशासन: एक दिनको लागि कुरा गरिरहेको छैन;
१ planning मिनेट दैनिक योजना र एक घण्टा साप्ताहिक योजना;
कसरी स्नेह देखाउन, अरूलाई मद्दत गर्ने, र प्रत्येक दिन कृतज्ञ हुन कसरी दैनिक प्रतिबिम्ब।
जन्म, बचपन र अध्ययन
रोबिन शर्माको जन्म १ 1965 XNUMX मा युगान्डामा भएको थियो। उहाँ एक हिन्दू बुबा र केन्याकी आमाको छोरा हुनुहुन्छ। उहाँहरू क्यानाडाको पोर्ट हक्सबरीमा जानुभयो, उहाँ सानो छँदा। त्यहाँ उसले आफ्नो बाल्यावस्था र आफ्नो जवानीको धेरै समय बितायो, जहाँ उनले जीव विज्ञानको अध्ययन गर्नमा आफूलाई समर्पित गरे। पछि, उनले नोभा स्कोटियाको डलहौजी विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर डिग्री हासिल गरे।
अध्ययनको त्यो घरमा उनले कानून वर्ग पढाउँथे र आफ्नो बोल्ने कला खेती गर्न थाले। अन्ततः, se उनले आफ्नो जीवनमा आमूल मोड लिने र कानूनमा आफ्नो क्यारियर छोड्ने निर्णय नगरेसम्म एक प्रसिद्ध वकील बने। आज शर्मा धेरै देशहरूमा प्रख्यात छन् उनको अनगिनत प्रेरणादायक र नेतृत्व व्याख्यानको कारण।
रोबिन शर्मा, लेखक
शर्माको प्रकाशनको शुरुआत एकदम नम्र थियो। उसको साहित्यिक प्रीमियर थियो मेगालिभिंग: एक उत्तम जीवनको a० दिन (1994), स्व-प्रकाशित र आफ्नो आमा द्वारा सम्पादन। उनको दोस्रो पुस्तक - १ 1997 XNUMX in मा स्वयं प्रकाशित - पनि थियो भिक्षु जसले आफ्नो फेरारी बेचे.
भिक्षुको पुस्तक गद्य लिरिक हो आत्मिक वृद्धिको विशेषताहरूको साथ आत्मिक वृद्धिको पथमा एक वकिल को आफ्नो भौतिकवादी दैनिक जीवन को पार गर्न दृढ संकल्प। यो कथा वास्तवमा हार्पर कोलिन्सका पूर्व राष्ट्रपति, एड कार्सनले क्यानाडाको पुस्तक पसलमा "भेट्टाए" पछि प्रख्यात भयो। शीर्षक १ 1999 XNUMX। मा पुन: शुरू हुन्छ।
रोबिन शर्मा द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकहरु
8 भिक्षुको नेतृत्वको कुञ्जी जसले आफ्नो फेरारी बेचे (नेतृत्व फरिसी भिक्षु जसले आफ्नो फेरारी बेचे, १1998));
तपाईको मृत्यु पछि कसले शोक गर्नेछ? (जब तपाईं मर्न लाग्नुहुन्छ जो रोउनेछ: भिक्षुबाट जीवन पाठ जसले आफ्नो फेरारी बेच्यो, १1999));
सन्त, सर्फर र कार्यकारी (सेन्ट, सर्फर, र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, १2002));
नेता छैन जो कुनै स्थिति थियो (नेता जो शीर्षक थिएन, १2010));
भिक्षुबाट गोप्य चिठीहरू जसले आफ्नो फेरारी बेचे (भिक्षुको गोप्य चिठ्ठी जसले आफ्नो फेरारी बेच्यो, १2011));
ट्राइफफ (सानो कालो पुस्तक आश्चर्यजनक सफलताको लागि, १2016));
A बिहानको क्लब (AM बिहान क्लब, 2018)।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » भिक्षु जसले आफ्नो फेरारी बेचे
पुरुष मारियास। पछिल्लो डोभका लेखकसँग अन्तर्वार्ता